Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Balanqaadyada duulimaadka ee USA ayaa kor u kacay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Balanqaadyada duulimaadka ee USA ayaa kor u kacay.
Booqashada duulimaadka ee Maraykanka ayaa sare u kacday ka dib laba ogeysiis ah oo ku saabsan in meesha loo socdo ay dib u furmi doonto socotada ajnabiga ah ee la tallaalay bisha November.
Meeshii ugu sarreysay waxay ahayd safarka isla markiiba ka dib nasashada xannibaadaha inta lagu jiro usbuuca bilaabmaya Noofembar 8.
Heerka labaad ee ugu sarreeya wuxuu ka sarreeyey Kirismaska, isagoo gaadhay 16% jaale intii lagu jiray toddobaadka Kirismaska ​​iyo 14% toddobaadkii ka horreeyay.
Kor u kac aad u weyn oo ku saabsan ballansashada Mareykanka ee xilliga kirismaska ​​ayaa la filayaa toddobaadyada soo socda.
Cilmi-baaris cusub ayaa daaha ka qaaday in ballan-qaadyada duulimaadka USA ayaa sare u kacday ka dib laba ogeysiis ah oo sheegaya in meesha loo socdo ay dib u furmi doonto socotada ajnabiga ah ee la tallaalay bisha Nofembar. Bartamihii Oktoobar, ballan-qaadyada toddobaadlaha ah ayaa dhaaftay 70% heerarkii hore ee masiibada.
Ku dhawaaqistii ugu horeysay waxaa la sameeyay 20th Bishii Sebtembar, markii Aqalka Cad uu sheegay in booqdayaasha ka socda Boqortooyada Ingiriiska, Ireland, 26 -ka dal ee Schengen, China, India, South Africa, Iran iyo Brazil loo oggolaan doono inay soo galaan USA, iyada oo aan la karantiilin, waase haddii si buuxda loo tallaalay. Taasi waxay keentay falcelin degdeg ah, iyada oo toddobaad-ka-toos-buucyada boosaska UK ay ka boodeen 83%, laga soo bilaabo Brazil oo booday 71%, iyo EU booda 185%!
Ku dhawaaqida labaad ayaa lagu dhawaaqay 15th Oktoobar, markii Kaaliyaha Xoghayaha Warfaafinta ee Madaxweynaha Mareykanka, Kevin Munoz, uu magacaabay 8th Noofambar maadaama xaddidaadaha taariikhda la dejin doono. Boosaska usbuuca-usbuuca ayaa sare u sii kacay, iyagoo ka booday 15% UK, 26% EU iyo 100% Brazil.
Isagoo eegaya qaybinta ballan-qaadyada la xaqiijiyay, imaatinka Noofambar iyo Diseembar, ee laga keenay saddexdaas suuqood (Brazil, EU iyo UK), waxaa jiray laba cad oo cad. Meeshii ugu sarreysay waxay ahayd safarka isla markiiba ka dib nasashada xannibaadaha inta lagu jiro usbuuca bilaabmaya 8th Noofembar, oo la gaaray 15% boosaska. Meesha labaad ee ugu sarreysay waxay dhaaftay kirismaska, iyada oo la gaadhay 16% boosaska kirismaska ​​todobaadkii iyo 14% wiiggii ka horeeyay.
Xogtan ayaa haddana muujinaysaa baahida weyn ee safarka. Isla markiiba dadku waxay maqleen in loo ogolaan doono inay soo booqdaan USA mar kale; waxay ballan qaadeen; iyo qayb la taaban karo oo loo ballansan yahay inay duulaan sida ugu dhakhsaha badan ee ay awoodaan.
Waxa kale oo xiiso leh in la ogaado in ballan-qaadyadu kor u kaceen markii taariikh gaar ah la bixiyay. Taasi gabi ahaanba lama yaabin laba sababood awgood. Marka hore, hubinta taariikhda gaarka ah waxay dhiirigelisaa kalsoonida.
Midda labaad, kuwa doonaya inay safraan ka hor dhammaadka Noofembar ma awoodi karaan inay ballan -qaadaan ilaa ay ogaadaan hubaal inay safri karaan markay rabaan. Kor u kac aad u weyn oo ku saabsan ballansashada Mareykanka ee xilliga kirismaska ​​ayaa la filayaa toddobaadyada soo socda.